Ukufumana uMcebisi weNtengiso - Forex Lens
bonke 4 /Iseshoni yokuFunda eyiyo 0 /EURUSD 0 /LeMfundo leMfundo 0 /Ukukhuthaza Forex 0 /Signals Forex 0 /Uhlalutyo loRhwebo lweMali yaseYurophu 0 /Ibhulogi yokuThengisa ye-Forex 0 /Ndiyaqalisa 4 /Iimpawu 0 /Igumbi lokuRhweba eliPhila 0 /Akhawunti aphethwe 0 /IMfundo yeNtengiso 3 /Uluvo lweNtengiso 0 /Media 0 /iindaba 0 /Uhlalutyo Technical 0 /Uncategorised 0
Abafundisi-ntsapho, Abafundisi beGym nabaProfeti bobuxoki
Batsho xa umfundi sele elungile, utitshala uya kuvela. Ngokuqinisekileyo oku kuyinyani kum izihlandlo ezingaphezu kwesinye. Ngapha koko ndiyakholelwa ukuba ngomnye wale mithetho yendalo iphela ebonakala ngathi ivela nini kwaye phi apho ungayilindelanga khona. Kananjalo bathi kuthatha ilali ukukhulisa inkwenkwe, kwaye oku kuyinyani ngokuqinisekileyo xa kuziwa kurhwebo. Inene bendiqeqeshwa ngabantu abaninzi ngaphambi kwam, kwaye nabo baqeqeshwa ngabo beza ngaphambi kwabo. Kukho ubuhle kolu kuqhubekeka. Kwaye uyazi, iyinyani into abayithethayo. Abo bangakwaziyo ukufundisa, umthambo weqela. Kwaye abo bangakwaziyo ukurhweba, bafundise ukurhweba.
Okulusizi kukuba, kunjalo kaninzi, xa kusiziwa kubacebisi kwezorhwebo. Kuyinyani eyaziwayo yobomi ukuba uninzi lwabafundisi-ntsapho kwi-Intanethi, ngakumbi abo bafumana imali ezinkozo kunye neemoto ezikhawulezayo zeentlobo ngeentlobo ze-Instagram, ngokwenene zinombane kwaye azikho sizzle. Bangabathengisi abakwi-Intanethi abadlala koloyiko lwakho nokubawa kunye neziseko zabantu. Uninzi lwezi doofus alwazithengisi iiakhawunti zokwenyani, uyekelele inzuzo kwiakhawunti yedemo. Uninzi lusebenzisa iiakhawunti zedummy kunye nobuxoki obucacileyo. Uninzi oluninzi lubiza imali yabarhwebi abangasoze bahlawule. Uluhlu luyaqhubeka.
Nditsho neTiger ine caddy
Ke kungena njani i-noob kurhwebo xa kukho imingxunya emininzi ekufuneka uyiphephe? Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ukufumana umcebisi osemgangathweni yeyona ndlela ifanelekileyo yokufunda. Kuya kufuneka uzilungelelanise nomntu ohambe indlela eya kwinzuzo phambi kwakho, kwaye uya kunciphisa kakhulu ixesha lakho lokugcina ixesha kunye neenzuzo. Emva kwayo yonke loo nto, awunakuzama ukukala i-Everest ngaphandle kweSherpa ngoku uyakwenza oko? Nditsho neTiger Woods ine-caddy, kunye nabaqeqeshi abaninzi kunye nabadliwayo. UTom Brady wenza njalo, kwaye umongameli unabaninzi, abacebisi abaninzi abasebenzisa amagama amakhulu kwaye banxibe iminqwazi ehlekisayo.
Inqaku leli, awungekhe uhambe nje wedwa. Iincwadi zokufunda zodwa azanele. Udinga umntu wokukubonisa ngokwenene iintambo, kwaye ngokulula, uya kwenza ngcono kunye nomcebisi kuyo nayiphi na into oyikhethayo, hayi nje urhwebo. Le yinyani nje yobomi, yiyo loo nto uninzi lwamagcisa akhokelela kwi-Intanethi namhlanje. Nabo bonke bafundiswe phantsi komlingo othile kwindawo ethile.
Iziphumo Zenyani Matter
Ke kwakhona, sibuyele kumbuzo wethu, kwenzeka njani ukuba i-noob ithengise xa kukho imingxunya emininzi ekufuneka uyiphepha? Xa kuziwa ekufumaneni umcebisi, kukho izinto abanokuzenza abathengisi ukuzikhusela. Into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha umcebisi ngaba yeyokwenyani? Ngaba bathengisa iiakhawunti zokwenyani? Ngaba bavelisa iziphumo zokwenyani? Ngaba bazama ukukuthengisela iphupha okanye ngaba bavulekile kwaye banyanisekile ngeenyaniso ezibandayo zokurhweba? Njengawe, ukuba zinenzuzo enkulu, zibashukumisela ukuba bafundise ntoni? Ngaba bayayenza ukuze babuyise, okanye benze nje imali?
Ngombulelo, xa kufikwa kwi-Forex, ngoku kunanini na ngaphambili kukho iwebhusayithi ezininzi zomntu wesithathu apho iiakhawunti zomrhwebi kunye neziphumo zinokulandelelwa kwaye ziqinisekiswe. Omnye umzekelo onjalo zitshsbook.com umzekelo. Kusenokwenzeka ukuba zezona zibalaseleyo zaziwayo. Baninzi nabanye, kwaye konke umrhwebi ekufuneka ekwenzile kukukhuphela isoftware kwaye ayilayishe kwi-akhawunti yabo kwaye imbali yabo yonke yokuthengisa inokushicilelwa kwimizuzu. Ngombulelo, akudingeki ukuba ukhangele kude, njengoko umthengisi wethu weenkwenkwezi RP I-Forex is phezulu kwaye uhlala kwi Igumbi lokurhweba le Forex bakhe Iziphumo ze-forex ziyinyani Ukuba ujonge umntu ocebisayo oqinisekisiweyo, ophila ngokuhamba nemijelo yakhe yemihla ngemihla, sukujonga kwakhona.
Khumbula, iziphumo ezizizo nezingqinisisiweyo kufuneka zihlale zikhonza njengesiseko esincinci esincinci sokuthelekisa. Emva kwayo yonke loo nto, amanani akaxoki, kodwa amanani wona nangona kunjalo. Musa ukuba yi-manani, ube ngumlinganiso.
Ngubani Op-Ed & Forex Lens
U-Op-Ed ngumrhwebi onomdla kunye nomfundi wazo zonke izinto zobomi, enomoya ophefumlelweyo wokunceda abanye ukuba bafezekise iinjongo zabo kunye namaphupha abo. U-Ed uneminyaka esi-7 yamava ezemali kunye naworhwebo, ekubeni bobabini basebenze kwicala labarhwebi, kunye nentengiso yokuxhasa kunye nenkxaso yorhwebo. Usebenze njengomrhwebi oqeqeshiweyo wemali kwaye ujolise ikakhulu kwiGolide, i-S & P kunye ne-Forex. U-Ed ukwanomdla wokuqala ekucebiseni abafundi ngokusesikweni, njengoko ebekhe wenza ngokungekho sikweni kule minyaka idlulileyo. Uhlala ekulungele ukuthetha ivenkile.
Nditsalele umnxeba okanye undithumelele incoko ngoku ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nendlela yokuqalisa urhwebo!
okanye uqalise nge Igumbi lokurhweba le Forex!
I-EURUSD kunye ne-NZDUSD Shorts Kule Veki? I-GBP Bearish? Amanqindi ePowell KwiDola eDumileyo + ye-USDCAD Swing Short in Play?